Toetra 12 an'ny olona mandalo - Blog
Toetra 12 an'ny olona mandalo
Ny fanaovana passive voajanahary dia mety sady fitahiana no ozona, arakaraka ny toe-javatra iainanao…
… Ary hatraiza ny halehiben'ny fitiavanao!
Ny maha-passive anao dia mamaritra ny toetranao, ny anao mahatsapa fa manan-jo ianao , ary ny fahitanao an'izao tontolo izao, ny olona manodidina anao, ary ny toerana mety aminao amin'izany sary izany.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny passivity dia mety ho plus, satria midika izany fa afaka miatrika tsara kokoa amin'ny adin-tsaina ianao, nefa tsy miditra am-pihetseham-po be loatra ary mamela azy io hisy fiantraikany aminao.
Ny passiveness koa dia mifandraika amin'ny hatsarana, fandeferana ary fitoniana - toetra azon'ny olona maro atao amin'ny zavatra kely kokoa amin'ity tontolontsika adala ity.
Na izany aza, rehefa lasa ny toerana misy anao ny passivity, dia mety hanomboka hisy vokany ratsy eo amin'ny fiainanao.
famantarana ny vehivavy sakaiza manana fihetseham-po ho anao
Misy fotoana ilana izany mazotoa ary manamafy. Fotoana ilanao mandray ny vozona, ataovy izay hitranga amin'ny fiainanao, fa tsy hipetra-pialana fotsiny ary avelao hitranga aminao izany.
Raha mandefitra foana ianao, dia mety hiaina ny fiainanao toa ny mpilalao mpanohana fa tsy ny kintan'ny sarimihetsika.
Inona koa, tsy hoe satria passive voajanahary ianao, tsy midika izany hoe tsy mahatsapa hatezerana na alahelo ianao dia mamono azy ireo fotsiny.
Tsy hanjavona majika fotsiny izy ireo, fa hipoaka ao ambany kosa ary mety hiteraka lolom-po na fipoahana lavitra kokoa.
Mety ho sarotra aminao ny mitsara tsy am-piheverana na tsia ianao, na lasa olona mandalo. Na dia miharihary aza fa miharihary amin'ireo manodidina anao izany, raha toa ka ny toerana misy anao mandeha ho azy dia mety ho sarotra aminao ny misafidy.
Raha mieritreritra ianao fa mety ho olona mpandefitra, ity lisitry ny toetra mahazatra ity dia tokony hanampy anao hanapa-kevitra mazava.
1. Tsy mandray andraikitra mihitsy ianao
Ny olona mandefitra dia tsy ho mpitarika vondrona velively. Amin'ny dia iray dia tsy ianao no mitazona sarintany na manapa-kevitra momba ny drafitra ho an'io andro io. Ary tsy hanolotra ny hevitrao ianao raha mety ny fisakafoanana manokana na toerana mety hijanonana hanaikitra haingana.
Rehefa anontaniana ianao hoe inona no tianao, dia ianao no hiteny hoe tsy mampaninona anao, na aleonao manapa-kevitra ny hafa rehetra.
Tsy mody tsy mampaninona anao fotsiny ianao na tena tsy tianao ny tena, na aza mieritreritra fa ny fomba fijerinao dia zava-dehibe mihitsy.
Ho an'ny olona tsy mandalo mitady hevitra na fampiasa dia mety hahatezitra izany.
2. Tsy manome lanja ny hevitrao manokana ianao
Tsy mieritreritra ianao fa ny hevitrao amin'ny zavatra, na inona na inona fahalalanao tsara momba an'io lohahevitra io, dia zavatra hahaliana ny olon-kafa na mendrika hambara.
Rehefa manolotra ny hevitrao ianao dia ataonao mendrika izany amin'ny alàlan'ny fanombohana hoe 'Diso angamba aho…,' na teny mahomby amin'izany. Izany dia manome antoka fa tsy dia mifanaraka firy aminao ny olona na mandray ny fomba fijerinao ho matotra noho izay tokony ho izy.
3. Ianao boloky
Satria tsy matoky ny hevitrao ianao dia mahita ny hevitry ny olon-tianao, ny fianakavianao na ny namanao akaiky indrindra mivoaka avy am-bavanao, na dia tsy mifanaraka tanteraka amin'izy ireo aza ianao.
4. Hanao zavatra rehetra ianao amin'ny fiainana milamina
Mety misy fotoana milaza amin'ny anao ny feonao anaty fa tokony hiteny momba ny zavatra iray ianao, fa tsy afaka mitondra tena hanao korontana fotsiny ianao.
Tianao ny fiainana tsotra sy mora ary mandeha amin'ny lalan'ny fanoherana faran'izay kely, toy izay hitarika ny lohanao ambonin'ilay parapet.
5. Avelanao ho tonga amin'ny lahatra ny raharaha
Tianao ny mino fa ny hoavinao dia efa nomanina ho anao, ka tsy misy antony tokony hanoherana, na zavatra hafa.
Tsy mino ianao fa ny fihetsikao dia afaka manova ny fizotran'ny fiainanao, noho izany dia mipetrapetraka fotsiny ianao ary mamela ny zavatra hitranga aminao.
Rehefa tsy mahomby amin'ny zavatra iray ianao dia manaiky fotsiny fa tsy natao ho izy, fa aleo maka lesona avy eo ary manome tifitra hafa.
6. Eny foana no lazainao
Tena manana fotoan-tsarotra ianao milaza tsia na inona na inona angatahan'ny olona aminao, na dia mamono anao aza izy na misy vokany ratsy aminao.
Aleonao kokoa mitazona ny hafa faly noho ny loza mety hanelingelina azy ireo na manelingelina azy ireo, ary manome ny lanjanao ho kely kokoa noho ny azy ireo ianao.
7. Mino ny vintana ianao
Tsy mieritreritra ianao fa ny fahombiazana dia miankina amin'ny asa mafy sy fanoloran-tena. Mihevitra ianao fa ajanona amin'ny vintana amin'ny fisarihana.
Raha misy zavatra tsy mety dia soratanao ho azy io fa tsy ny andronao tsara vintana, fa tsy mijery izay mety tsy nety nataonao ary mieritreritra ny fomba ahafahanao manamboatra zavatra hahazoana vokatra hafa amin'ny manaraka.
8. Azonao atao ny manamarina ny lahateninao
Tsy miteny mivantana ianao dia mikapoka manodidina ny roimemy. Momba ilay 'oh marina, tsara, mino aho fa mety ho marina izany, angamba.'
mila faly indray aho
Misalasala ianao rehefa miteny, tsy te hahatratra ny teboka na hahatonga ny olona hieritreritra fa matoky ny hevitrao ianao.
Rehefa manomboka ny fehezanteninao amin'ny fehezanteny toy ny hoe “Mety ve raha…?” na 'Raha tsy maninona ianao…,' dia maneho fa ianao mangataka ny fankatoavan'ny hafa .
9. Miteny malefaka ianao
Raha tsy manana fahatokisana amin'izay nolazainao ianao dia tsy mihorakoraka amin'izany. Miresaka mangina ianao, ary matetika dia miala amin'ny faran'ny fehezanteny iray.
Mampita amin'ny olona manodidina anao izany fa tsy heverinao ho zava-dehibe izay hahenoin'izy ireo izay lazainao.
10. Halaviranao ny manolo-tena raha mety vitanao izany
Raha misy safidy ahafahanao manapa-kevitra eo anelanelany ary mila misafidy lane iray ianao, dia miahanahana mandritra ny fotoana lava araka izay azo atao, milaza fa samy manana ny teboka ampiany ary manantena fa hisy olon-kafa handray fanapahan-kevitra ka tsy mila manapa-kevitra ianao .
11. Mitolona amin'ny fanapahan-kevitra lehibe amin'ny fiainana ianao
Tsy zatra mandray fanapahan-kevitra kely isan'andro ianao, noho izany dia manana fotoana tena sarotra ianao rehefa manapa-kevitra ny amin'ny zavatra lehibe. Miandry ny zavatra ho tonga aminao ianao fa tsy mivoaka ary mitady fotoana mety amin'ny fiainana.
Mifanaraka am-pitiavana ianao, miditra amin'ny fifandraisana fa tsy manapa-kevitra ny ho ao aminy, ary avelanao ny vadinao hibaiko ny hafainganan'ny hafainganana .
12. Mijanona ao amin'ny faritra mampionona anao ianao
Tsy mandeha mitady ny fientanam-po sy adrenalin'ireo traikefa vaovao ianao. Faly be ianao miaina ao anatin'ny faritry ny faritra mampionona anao, na dia fantatrao aza fa mijanona eo ianao.
Olona mandefitra ve ianao?
Raha mamantatra amin'ny iray na amin'ireo toetra rehetra ireo aza ianao dia tsy mila mikoropaka. Ny hoe passive dia zavatra tsara amin'ny toe-javatra maro, raha mbola tsy avelanao hibaiko ny fiainanao izany.
Ny fahafantarana ny fitiavanao no dingana voalohany mankany amin'ny fanovana ny fitondrantenanao izay mety hitarika amin'ny fanatsarana ny fiainanao.
Ny fandaminana ny toetranao mandalo dia mety ahafahanao manenjika ireo zavatra tena tadiavinao, mahatratra ny tanjonao, ary tena mahazo ny fanajan'ny olona manodidina anao.
Tsarovy hatrany fa manan-danja toy ny olon-drehetra ihany ianao, tsy latsa-danja noho izany ny hevitrao, ary adidinao amin'izao tontolo izao ny mizara ireo fanomezana teraka anao.
Aza matahotra ny mampiakatra ny feonao ankehitriny mba hijoro amin'ny zavatra heverinao fa mety.
Tsy azonao antoka ny fomba tsy dia hanan-danja loatra amin'ny fiainanao ary hitantana azy io? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana no hieritreretanao samirery fa tsy hanaiky fotsiny izay lazain'ny hafa aminao
ahoana no ahafantarako bebe kokoa ny tenako
ny fomba fanasitranana fanambadiana aorian'ny lainga
zavatra folo tokony hatao rehefa mankaleo
tsy manana tanjona na antony manosika aho